Home » Creative Writing » လက်ဆောင်
Posted by ၀င့်ပြုံးမြင့် on Feb 21, 2015 in Creative Writing, Critic | 42 comments
အလှူ ဒါန ပရဟိတ
.အလှူ ဒါန၊ ပရဟိတ နဲ့ပတ်သက်လို့ ၀ိဝါဒတွေကွဲပြားမှု ရှိနေတာ တကယ်တော့ စကားလုံး ပြ၁သနာများလားလို့ ကျမ တွေးနေမိပါတယ်။
.ဘယ်စာအုပ်တွေလဲလို့ အတိအကျ စာရင်းချမပြနိုင်တော့ပေမယ့် ကျမ ဖတ်ခဲ့တဲ့ စာအုပ်တွေထဲမှာ အလှူ အတမ်း များတဲ့ တိုင်းပြည်တွေ ဆင်းရဲ ချမ်းသာ ကွာဟမှု ကြီးကြတယ်။ ဥပမာ အာဖဂန်နစ္စတန်၊ ပါကစ္စတန်၊ အီရန်၊ အီရတ် စတဲ့ အစ္စလာမ် နိုင်ငံတွေဟာ လှူ တဲ့တမ်းတဲ့ နေရာမှာ မြန်မာတွေနဲ့ တော်တော်တူပါတယ်။ မြန်မာတွေက ထမင်းရေချောင်းစီး လှူ ကြသလို သူတို့ကလည်း သွေးရည်ချောင်းစီးလှူ ကြတယ်။ လှူ တဲ့လူတွေ လှူ နေလျက်ကပဲ ဆင်းရဲ ချမ်းသာ ကွာဟမှုက လျော့ကျ မသွားဘူး။ အစိုးရ အုပ်ချုပ်ရေး ယန္တရားကြီး တစ်ခုလုံး အရည်အသွေးမမီတော့ အဲဒီလိုပဲ အလှူ အတမ်း၊ ပရဟိတ တွေနဲ့ အသာမျောပြီး လိုက်နေကြတဲ့ သဘောပါ။ အလှူ ဒါန နဲ့ ပတ်သက်လို့ သက်ဆိုင်ရာ ဘာသာရေးကလည်း ပြီးပြည့်စုံအောင် အမျိုး မျိုး အထွေထွေ ပြဆိုထားတဲ့အခါ ဝေဖန်စရာ ထောက်ကွက် ဟာကွက် မရှိပါဘူး။ သစ်မရမီ ၀ါးပေါင်းကွပ်ရတဲ့အခါ ၀ါးပေါင်းလေးကလည်း ပြစ်မျိုး မှဲ့မထင် ချစ်စရာလေး ဖြစ်နေတော့တာကိုး။
.လူတွေမှာ မိမိကိုယ်ကို ကောင်းအောင် ကြိုးစားမှု ဆိုတာ ရှိစမြဲ။ ဘယ်သူမဆို လူကောင်းသူကောင်းပဲ ဖြစ်ချင်တယ်။ ဒီအတွက် ခရီးသွားဟန်လွဲလေးကအစ၊ ကြုံရင်ကြုံ သလို ကူညီရိုင်းပင်းကြတယ်။ နှုတ်၏စောင်မခြင်း၊ လက်၏စောင်မခြင်းတွေနဲ့ တတ်နိုင်သမျှ ကူညီကြဖို့ နိုင်ငံတကာ ကျောင်းသင်ခန်းစာတွေထဲမှာတောင် ထည့်သွင်းပြဌာန်းထားရတယ်။ ကြက်ခြေနီ စတဲ့ အရေးပေါ် ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေ၊ အခြား ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ လူမှုရေး ကူညီမှု အသင်းတွေ အားလုံးဟာ ပရဟိတ ထဲမှာ အကျုံး ၀င်တယ်။
.သို့သော် … သို့သော် … တိုက်ရိုက်ပေးကမ်းမှုမှာတော့ စဉ်းစားစရာတွေ ရှိလာပြီ။ အဲဒီနေရာမှာ အလှူ ဒါနတို့ ၊ ပရဟိတ တို့ စတဲ့စကားလုံးတွေကို သွားမထိတို့ဘဲ စကားလုံး ပြောင်းသုံးရင် ကောင်းမလား ရိုးရိုးရှင်းရှင်း တွေးမိတာပါ။ ဥပမာ ကျမကို သူများက ရော့ – မပြုံးအတွက် လက်ဆောင် – ဆိုပြီး ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေးရင် ကျမ ၀မ်းသာအားရ လက်ခံမိမှာပဲ။ ဒီလို မဟုတ်ဘဲ – မပြုံးအတွက် ထောက်ပံ့တာပါ၊ လှူ တာပါ – ဆိုပြီး ပေးရင် ကျမ လက်သင့်ခံနိုင်ဖို့ မလွယ်တော့ဘူး။ ကိုယ်က ပေးစာကမ်းစာ လက်ခံရသလိုရှိပြီး သူတို့ကတော့ ဒါနရှင်ကြီး ဖြစ်သွားတာကိုး။ အဲဒီ သဘောပါ။ ဒီရွာထဲမှာ လေးခလည်း ရေးဖူးတယ်။ နိုင်ငံတော် သမ္မတကြီးက မူလတန်းကလေးတွေအတွက် ထောက်ပံ့ငွေ တစ်ယောက်တစ်ထောင် ပေးတယ်ဆိုတာကို ထောက်ပံ့ ငွေအစား မုန့်ဖိုး လုိ့ ပြောင်းသုံးသင့်ကြောင်း ရေးထားတာပါ။
.ဥပမာ ကလေးတွေအတွက် ငွေကြေးနဲ့ စာအုပ်စာတမ်း ပစ္စည်းကိရိယာတွေ လှူ တဲ့အခါ ပညာရေးဒါန လို့ မပြောဘဲ – လက်ဆောင် – ဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်းလေး ပိုကောင်းနိုင်မလားလို့ တွေးကြည့်တာပါ။ သားတို့ သမီးတို့ အတွက် လက်ဆောင်ပါတယ် ဆိုတာမျိုး။
.တစ်ကမ္ဘာလုံးက လူတွေ အချင်းချင်း လက်ဆောင်တွေ ပေးကြတယ်။ ကိုယ်ခင်မင်တဲ့သူတွေအတွက် တန်ဖိုး နည်းသည်များသည်မဟူ သေချာထုပ်ပိုးလို့ တခုတ်တရလေး ပေးတတ်ကြတယ်။ လက်ဆောင်ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ထဲမှာ ခင်မင်ရင်းနှီးမှုပါတယ်။ စေတနာပါတယ်။ အထူးသဖြင့် တစ်ဖက်လူကို ကိုယ်နဲ့ တန်းတူ တန်ဖိုးထားမှုပါတယ်။
အလှူ ဒါန ဆိုတဲ့ စကားလုံးကိုတော့ ကိုယ့်ထက်မြင့်တဲ့ ရဟန်းသံဃာတွေကို လှူ မှ သုံးသင့်တယ် ထင်ပါတယ်။ ။
I cannot agree with you more this time.
မှန်တာပေါ့ မလက်ဆောင်ရေ့ အဲ…..မပြုံးရေ့ အသုံးအနှုန်း အခေါ်အဝေါ်က အလွန်အရေးကြီးလှပါတယ် မပြုံးပြောသလို သုံးနှုန်းသင့်ကြောင်းကို လိုက်နာဖို့လဲ အသင့်ပြင်ထားပါတယ် ကျွန်တော်လဲအမှန်ဆို အဲလိုတွေသုံးနှုန်းတာ မကြိုက်ဘူးဗျ တစ်ချို့ရှိသေးတယ် မိဘမဲ့ကလေးတွေကို အပယ်ခံကလေးငယ်များ စောင့်ရှောက်ရေးဂေဟာတဲ့ တော်တော်ကြည့်ရစိုးတယ်ဗျာ နဂိုကမှ မိဘမရှိလို့ သိမ်ငယ်နေပါတယ်ဆိုမှ။ ဒီလိုပဲ အမပြောတဲ့ထဲမှာ ပေးကမ်းစွန့်ကြဲတယ် ထောက်ပံ့တယ်ဆိုတာထက် လက်ဆောင်ပေးတယ်ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို အပြည့်အဝထောက်ခံပါကြောင်း…………။
.အလှူ အတမ်း များတဲ့ တိုင်းပြည်တွေ ဆင်းရဲကြတယ်။ အစိုးရကလည်း အသာမျောထားလိုက်တာပေါ့။ အဲဒါကြီးက ခက်တာ။ ပြီးတော့ လူမှု ကူညီရေးအသင်း လို့ နာမည်ပေးတာကတော့ ကောင်းပါတယ်နော်။ ဘယ်လိုထင်လဲ။
ဒါပေမယ့် အစ်မပြောသလို ညီမလည်းသူမျာိးကု တစ်ခုခုပေးရင်
ရော့ အစ်မယောက်ျားလေဖြတ်ထားတာ ည၀တ်ချင်အိပ်ပေါ့ဘောင်းဘီရှည်။
ရော့ ညီမတို့ အိမ်နေရင်းဝတ်ချင်ဝတ်ရတာပေါ့
အစ်မချိုင့်ထဲ ထမင်းကျန်လေးတွထည့်ပေးလိုက်တယ် ၀က်ကျွေးချင်ကျွေး
စသည်ဖြင့် အားနာပါးနာပြောပြီးပေးလေ့ရှိတယ်။အမှန်တော့ ကိုယ်ပေးတာတွေက သူတို့တကယ်အသုံးတည့် တကယ်သေချာဝတ် စားသောက်ကြမယ့်ဟာတွေပါ။သို့ပေမယ့် သူတို့ယူရတာမ၀ံ့ရဲမှာစိုးလို့ စကားတွေခံခံပေးလေ့ရှိပါတယ်။
အပေါ်ကမမပြုံးလက်ခံတဲ့ ထမင်းရည်ချောင်းစီးကတော့ ညီမလည်းမကြိုက်ပါ။
ဒါပေမယ့် မြန်မာတွေအယူအဆကိုက သီလရှိတဲ့ပုဂ်ဂို(အောက်ကစာလုံးရိုက်မရလို့)ကိုလှူမှ ပိုကုသိုလ်ရ စင်ကြယ် မွန်မြတ်တယ်လို့ယူဆထားကြတာကိုး။
.အဲလိုမျိုး ကိုယ့်ထက်နိမ့်တဲ့ သဘောမျိုး နဲ့ ပေးပြီးရင် လက်ဆောင်ကောင်းကောင်း ပြန်ပေးပါ။ အမလည်း အဲဒီ ကိစ္စ ရှောင်လို့ မရဘူး။ ခလေးအင်္ကျီတွေ သူများပေးပြီးရင် အသစ် ၂ထည် ၃ထည်လောက်ကို လက်ဆောင် ကောင်းကောင်းထုပ်ပြီး ထပ်ပေးရတယ်။ သူတို့က ကိုယ့်လို ဦးနှောက် အလုပ် မလုပ်တော့ သူတို့ရဲ့ စိတ်ပိုင်းမှာ ဘာကိုထိသွားသလဲ ဆိုတာ သူတို့ကိုယ်တိုင် မသိကြဘူး။ ဒါကြောင့် စိတ်ပိုင်း မထိအောင် လုပ်တဲ့ သဘောပါ။
ပေးခြင်း နဲ့ ယူခြင်းမို့
အဲဒီ အသုံးအနှုန်းတွေ အပေါ် ခံစားချက်သိပ်မရှိဘူးရယ်။
လက်ဆောင် ဆိုလည်း ယူတယ်။
ထောက်ပံ့တယ် ဆိုရင်လည်း ယူမယ်။
စွန့်ကျဲတယ် ဆိုလည်း ယူမှာသေချာတယ်။
အဲဒီတော့ အခေါ်အဝေါ်ကိစ္စတွေတော့ နားလည်တဲ့သူတွေ ဆွေးနွေးကြပါလို့။
ကျနော်လည်း … သဘူတောပါတယ်။
လက်ဆောင်ဆိုတဲ့ စကားလေးက…ပိုပြီး. ..ကျေနပ်စရာကောင်းပါတယ်။
အိမ်မှာဆိုလဲ ပစ္စည်းတွေ အ၀တ်အစားဟောင်းတွေ ပေးတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အမေနဲ့ မကြာခဏ စကားများခဲ့ဖူးတယ်။
အမေက ကိုယ်အသုံးမလိုတော့တဲ့ အ၀တ်အထည်တွေ ပစ္စည်းအဟောင်းလေးတွေကို နင်တို့အသုံးဝင်မလား၊ ကြိုက်ရင် ယူပါလားဆိုပြီး ဆွေနီးမျိုးစပ်တွေ ရပ်ဆွေရပ်မျိုးတွေကို ပေးရင် ကျမတို့ညီအမတွေက ၀ိုင်းကန့်ကွက်ကြတယ်။
သူများက အားနာလို့ ယူသွားတာ။ ပေးချင်ရင် အသစ်အကောင်းပဲ ပေးဆိုပြီး ပြောကြတယ်။
အမေက အခုပေးတာကလည်း သုံးမရတာ ပျက်စီးစုတ်ပြတ်နေတာ မဟုတ်ဘူး။
လွှင့်ပစ်မယ့်အစား အသုံးတည့်ရင် သုံးပါစေ တဲ့လေ။
အမပြုံး လှူရက်နဲ့ မွဲနေတာက လေ တခါက ကိုသစ်ပိုစ့်မှာ တခါ မန့်ဖူးတယ်
ငါးတွေပဲ ပေးပြီး ငါးရှာနည်း မပေးလို့လေ
တနည်းပြောရရင် အမပြောသလိုပဲ လူတယောက်ရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာကို မမြှင့်ပေးနိုင်သေးလို့ပေါ့
ဆယ်စုချီပြီး လှူနေတဲ့ အီသီယိုးပီးယားလို ဒေသတွေ ခုထိ ရုန်းမှ မထနိုင်တာ ဖောင်းဒေးရှင်းပေါင်း များစွာရှိတယ်လေ အဲ့ဒေသတွေလည်း
ကိုသစ်သာဆို အမပြောချင်တာကို ချက်ကျလက်ကျပြန်ပြီး ခွဲပြမှာ
အမပြောသလို လက်ဆောင်အမည်တပ်တာကတော့ လူကြားကောင်းတာပေါ့ ဒါပေမဲ့ ….. ချွင်းချက်တော့ ရှိနေပြန်တယ်
ကျနော်ပြောရင် တိုင်ပတ်မှာ စိုးလို့ မပြောတော့ဘူးနော် ဟီး
တချို့ လက်​​ဆောင်​ကြ​တော့ သဒါ လို့ မဟုတ်​ပဲ ဘယာ​ကြောင့်​ ​ပေးရတာ​တွေကိုလည်း ရှိ​သေးသည်​။
.အန်တီ့အမြင်တော့ လက်ခံတဲ့လူရဲ့ စိတ်အခံပေါ်တည်ပြီး .ကိုယ့်ကိုနှိမ့်ချပေးတာလား၊မြှင့်တင်ပေးတာလား၊သာမာန်ပေး.တာ.လားလို့ အမြင်ပြောင်းသွားတာ ထင်ပါတယ်။
.အန်တီတို့ အမျိုးတွေကလေ ငယ်ငယ်ကတည်းက
.တအိမ်က ကလေး မတော်တော့တဲ့ ဂါဝန်ကို နောက်အိမ်က .ကလေးအငယ်ကို ပေးဝတ်တတ်ကြတယ်။
.အမေတွေက အ၀တ်အစားတွေ .ရိုရိုသေသေ လျှော်ဖွတ်တတ်ကြတော့ ဂါဝန်တထည်ဆို .ကလေး ၅ယောက်၆ယောက်ပြောင်းဝတ်ဖူးတတ်ကြတယ်။
.ဒါကြောင့် အ၀တ်အစားအဟောင်းပေးတာ သိမ်ငယ်တယ်လို့ .မထင်ခဲ့ဖူးဘူး။(သူများက ကိုယ့်ကို၊ကိုယ်က သူများကို)
.အခုထိလည်း အန်တီ့ကို အမတွေက ၀လာတော့
.သူတို့ချုပ်ပြီး မတော်တော့တဲ့ အကျီင်္တွေ ပေးကြတုံး။
.တခါတလေ တူမတွေကလည်း ပေးတယ်။
.ကိုယ်ကလည်း ပိန်ပိန်လာတော့ အရင်ခန္ဓာကိုယ်တုံးက .၀တ်ခဲ့တာတွေရော၊ဒီဇိုင်းဟောင်းသွားတာတွေရော .အလုပ်ထဲက ကလေးတွေကို ပေးလေ့ရှိတယ်။
.ဘီဒို မရှင်းအားလို့ အကျီလုံချည်တွေ .မပေးတာကြာရင်တောင် ကလေးတွေက သတိပေးကြတယ်။
.ဒါပေမယ့် အမျိုးထဲမှာ အထည်ကြီးပျက် .အဒေါ်မိသားစုကိုတော့ အဟောင်းမပေးရဲဘူး။
.ဘာလို့ဆိုတော့ သူတို့မှာ Inferiority Complexity.
.ငါ့ကို နှိမ်ပြီးပေးတာဆိုတဲ့ အငုံ့စိတ်ရှိလို့ပါ။
.သုံးသုံး-ပေးသူက လက်ခံသူကို သူအသုံးတဲ့ပါစေ .စိတ်နဲ့လေးလေးစားစားပေးသင့်ပြီး
.လက်ခံသူကလည်း သူ့စေတနာ .နားလည်ရင် ပြီးတာပဲလို့မြင်ပါတယ်။
.ဒါပေမယ့် ပေးတဲ့အခါ ပိုက်ဆံကြဲသလို .လုယက်ကောက်အောင်ပေးတာမျိုးကမှ လူ့ဂုဏ်သိက္ခာကို .ထိခိုက်စေတဲ့ ပေးခြင်းမျိုးလို့ မြင်ပါတယ်။
.ဒါ့ကြောင့် အန်တီ့မြို့မှာ နှစ်စဉ်ကလေးတွေကို သွားပေးတိုင်း
.ဆင်းရဲလို့ ထောက်ပံ့တာမျိုးအနေနဲ့ မပေးပဲ
.သူတို့ စာတတ်လို့၊မိဘကူလို့၊…စတာတွေကြောင့် .ဒီပစ္စည်းတွေကို ထိုက်ထိုက်တန်တန်ရတာလို့ မြင်အောင် ပေးပါတယ်။
.နိဗ္ဗာန်ဈေးဆိုပြီး ပိုက်ဆံရှိတဲ့သူတွေက ပေးကျွေး၊
.ပိုက်ဆံမရှိတဲ့သူတွေက အလုအယက်တိုးဝှေ့လုယူတဲ့ .အလှူမျိုးကို လုံးဝအားမပေးပါဘူး။
.(ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး အရှင်ဆေကိန္ဒရဲ့ ဘ၀ဖြောင့်ကြောင်း တစေ့တစောင်းတရားထဲက တပုဒ်ကို ကြိုက်လို့ အချိန်ရရင် ရေးပါအုံးမယ်။)
ကေ၊ အန်တီမမ၊ လက်လက်ဆင်၊ မမှီ၊ တီဒုံ၊ မယ်ပု၊
ပို့စ်လေးကို ၀င်အားပေးလို့ ကျေးဇူးပါ။ တကယ်တမ်း မျှစ် စိတ်ထဲမှာ ပြောချင်တာက မယ်ပု ပြောသလိုပါပဲ။ အလှူ ဒါန လုပ်တဲ့ တိုင်းပြည်တွေ တော်တော် ဆင်းရဲတယ်။ ဒါကြောင့် အလှူ ဒါနကို အားမပေးချင်ဘူး။ ခက်တာက အဲလို အားမပေးချင်ရင် ပရဟိတ သမားတွေ ဘယ်ကျေနပ်မလဲ။ အဲဒါကြောင့် တိုင်ပတ်သွားတာ။ ပရဟိတကလည်း မလုပ်လို့ မရဘူးလေ။ သစ်မရခင် ၀ါးပေါင်းကွပ်ရမှာကိုး။ အစိုးရယန္တရား စနစ်ကြီးတစ်ခုလုံး တော်တည့်မှန်ကန်သွားဖို့ ဆိုတာ သေရင်တောင် ဖြစ်လာနိုင်ဦးမှာ မဟုတ်ဘူး။
. မျှစ်တို့ လမ်းထောင့်က အမှိုက်ပုံမှာ မွေးကင်းစ ကလေး လာစွန့်တာ ၃ဦးရှိပြီ။ လာပစ်ထားတဲ့ အချိန်တိုင်းဟာ မျှစ်မ ကိုယ်ဝန်အရင့်အမာ ဖြစ်နေတဲ့အချိန်။ ဘယ်လိုမှ တာဝန်မယူနိုင်တဲ့အချိန်။ တစ်ခါတလေ စဉ်းစားမိတယ်။ မိဘမဲ့ကလေးတွေကို အပျိုကြီး လူပျို ကြီးတွေ တစ်ယောက် တစ်ဦး ကောက်ယူမွေးစားလိုက်ရင် အားလုံးကောင်းသွားမှာပဲလို့။ ဥပဒေကလည်း နည်းနည်းလျှော့ပေးရင် ကောင်းမယ်။ သားရင်းသမီးရင်း ရှိတဲ့သူ သေတမ်းစာရေးခွင့်မရှိ။ ကျန်သူတွေ ရေးခွင့်ရှိရင် ကောင်းမယ်။ သားရင်း သမီးရင်းကတော့ သူတို့ရဲ့ လူ့အခွင့်အရေးထိခိုက်မှာစိုးရတော့ မိဘတွေကို သေတမ်းစာ ရေးခွင့်မပေးသင့်ဘူးပေါ့။ မြန်မာမိဘတွေဆိုတာကလည်း သိပ်ဘက်လိုက်တတ်တာ။ ကလေးမွေးစားမယ့်သူတွေကို နည်းနည်းပါးပါး လျှော့ပေါ့ပေးရင် ကောင်းမယ်။ မွေးစားရမယ့်လူမှာလည်း ဘယ်လိုဗီဇတွေ ပါလာမယ်မှန်း မသိဘဲ ကိုယ့်ရဲ့ သက်ကြီးပိုင်း ဘ၀ကိုပါ ကံကြမ္မာလက်ထဲ ပုံအပ်ရတော့မှာကိုး။ ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ်ပါလေ။ ဒါတွေ စိတ်ကူးယဉ်ရတဲ့ အဆင့်ကကို တက်လာမှာ မဟုတ်ဘူး။ နောက်တစ်ခါ အမှိုက်ပုံမှာ ကလေးလာစွန့်ရင် မျှစ် မွေးမလားလို့ စိတ်ကူးနေတယ်။ ဘက်ဂျက် အခြေအနေအရပဲ။
လူပျိုကြီး၊ အပျိုကြီး တွေ သူတို့ဟာသူတို့ အပူမရှာ အေးအေးနေချင်လို့ ကို ဘယ်နှာကြောင့် ဆွဲထည့်နေတုန်း။
လူတွေ ဆင်းရဲ တာ က ပညာမတတ် (ဘွဲ့ ဒီ ဂရီ ကို မဆိုလို) အသိပညာဉာဏ် မရှိ၊ အတိမ်အနက် မတွေးတတ်ကြလို့ပါ။
ဒီမှာ ဆင်းရဲ ဆိုတာ ကို ထပ်ခွဲဦးမယ်။
အနေ အစား ဆင်းရဲ တာလဲ ဆင်းရဲတာ ခေါ်နိုင်သလို စိတ်ထားသေးသိမ် နိမ့်ကျတာလဲ ဆင်းရဲ တာပါ။
လိုရင်းကို ပြောရရင် ကလေး ကို လာစွန့်တာ ၂မျိုး ရှိတယ်။
(၂) တိတ်တိတ်ပုန်း ကမြင်းတာ ကို လူသိမှာ ရှက်လို့
ဒီလို လူ တွေ ဟာ ကိုယ်မမွေးနိုင်မှန်း သိရက် နဲ့ ဘာလို့ မွေးကြသေးလဲ။
မကျွေး နိုင်ရင် မမွေးတဲ့ အသိ ရှိအောင်
ရှက်တတ်ရင် ဘာတွေ မလုပ်ရဘူး ဆိုတာ သိအောင်
တကယ်တော့ ဒီလို ကလေး တွေ ကို စွန့်ပစ် တာ တွေ ဖောဖောသီသီ ဖြစ်လာတာဟာ တိုင်းပြည်က လူတွေ ရဲ့ စိတ်ဓာတ် တွေ နိမ့်ပါး လာတာ ကို ပြနေတာဘဲ။
အဲဒီလို စိတ်ဓာတ် တွေ ကို ဘယ်သူက ဘယ်လို တာဝန်ယူ ပြင်မှာလဲ ဆိုတဲ့ ဦးဆောင် တာဝန်ယူနိုင်သူ တွေ ကို ရှာရမှာ။
မဟုတ်ရင် စာရိတ္တပိုင်း က နောက်ပိုင်း ပိုပိုပြီး ဆိုးလာမယ်။
တို့ ရွှေပြည်မှာက ဥစ္စာဆင်းရဲလို့ စိတ်ဓာတ်နိမ့်တဲ့ သူရော ဥစ္စာပေါလွန်းလို့ စိတ်ဓာတ်နိမ့်သူရော ဖြစ်နေတော့တာ။
တကောင်ကြွက် အမြီးတန်း ဆိုတာ အပျိုကြီးတွေကို ပြောသလား မသိဘူး။
အိမ်ထောင်ရှင်တွေ မိသားစုတွေထက် ပိုအမျှင်တန်းနေသလိုပဲ။
ကလေးတစ်ယောက်မွေးစားဖို့ဆိုတာ လိုအပ်ချက်တွေ အများကြီးပဲ။
အရွယ်ရောက်တဲ့အထိ ပြုစုပျိုးထောင်ဖို့ဆိုတာ ငွေတခုတည်းရှိရုံနဲ့ မလုံလောက်ဘူး။
သူ့အတွက် အချိန်ပေးနိုင်ဖို့လည်း လိုတယ်။
( မွေးစားရမယ့်လူမှာလည်း ဘယ်လိုဗီဇတွေ ပါလာမယ်မှန်း မသိဘဲ) ဆိုတာကလည်း စဉ်းစားစရာပဲ။
နောက်ထပ် စဉ်းစားမိတာက ကိုယ်မွေးစားလည်း ဘယ်နှစ်ယောက်မွေးစားနိုင်မလဲလို့။ :b:
A toddler’s first years are paved with milestones — the first smile, the first step and perhaps most importantly, the first word —
all indicators of how well an infant is developing. But the latest research suggests that parents need not worry so much about delays in speech;
when baby’s first word comes late, it doesn’t necessarily spell trouble.
Reporting in the journal Pediatrics, researchers in Australia say that children who were late-talkers at age2did not show any increased risk of behavioral or emotional problems
throughout their childhood or adolescence, compared with children whose language development followed what experts considera“normal” trajectory.
Led by Andrew Whitehouse,apsychologist at Telethon Institute for Child Health research at the University of Western Australia, the scientists studied more than 1,300 2-year-olds
and followed them until they were 17 years old. At age 2, the team measured the toddlers’ language ability withastandard test of vocabulary; those who fell below the 15th percentile
for their age and gender were considered to be late-talkers.
Whitehouse also evaluated the children’s behavioral development by asking parents to fill out questionnaires at five different points during childhood.
The surveys asked about the youngsters’ emotional states and their responses to difficult situations, such as whether they lashed out or internalized their feelings when faced with frustration.
He believes that most of the behavioral problems among the 2-year-olds were due to their frustrations with not being able to communicate their feelings fully,
and are not necessarily signs of more serious psychosocial issues such as depression or attention deficit disorder.
That should come asarelief to parents who are concerned that their child does not meet specific language milestones set by pediatricians.
When toddlers are late to begin speaking, many parents try to intervene with therapy or attempt to push their children to talk more,
but the new study suggests that in most cases, that may not be needed. “Parents should not be overly concerned that late-talking at age2years will result in enduring language
and psychological difficulties for the child,” says Whitehouse. “There is good evidence that most late-talking children will ‘catch up’ to the language skills of other children.”
That doesn’t mean that all language delays should be dismissed, however. Some kids may simply be gettingaslower start, but if toddlers don’t start speaking by the time they enter school,
experts say that’s probablyasign that they may need some type of intervention to prevent future developmental issues.
The best way to ensure that children hit normal language milestones is to engage with them and stimulate them by introducing them to new things in their environment,
Whitehouse says. “Get down on the floor and play with [your] child, talk with them, read to them and interact with them at their level,” he says.
.ကျေးဇူးပါပဲ အမလတ်ရေ။ ခုမှပဲ အလုံးကြီးကျသွားတယ်။ သားက အားလုံး ပုံမှန်ပါပဲ။ စကားမပြောတာ တစ်ခုပဲ။ ပုံမှန်ဆိုတာ လိမ္မာရေးခြားရှိလာမယ် လို့တော့ မဆိုလိုပါဘူး။ နောင်ဆိုရင် ကျမတို့ ကျောင်းအုပ်ကြီးရုံးခန်းကို အခေါက်ပေါင်းများစွာ သွားရနိုင်တယ်။ မြို့ပေါ်မှာ ထီခနဲဆိုတာနဲ့ ပြုံးမောင် လက်ချက်ဟေ့ ဆိုတာ ဖြစ်လာနိုင်တယ်။ အဲလောက်ကို ဆိုးတာ။ ရင်မောရပါဘိတော့။ သမီးကို မွေးရတာ စိတ်ချမ်းသာရသလောက် သားနဲ့ မတူဘူး။
နှစ်ခုရှိတာ.. ရုံးလုပ်ငမ်းဗိုင်းကြတော့ လက်ဆောင်ဆို စာရင်းဂေါင်းဇင် တပ်ရ ခပ်သဗျ။ အစိုးမရလို ဗျူ ရိုကရေစီယမ်းဒရားမှာ ပိုဆိုးသာပေါ့စ်။ အခွံဗိုင်းမှာလဲ ဂွကျဗျံယော… ဘယ်လို သတ်မှတ်မှာလဲ။ အခွံကိစ္စ တဦးဂျင်းအတွက် ငွေပမာဏ သေးလွန်းဗေမှည့် ဘတ်ဂျက်ပိုင်းအရ ပျံကျိလျင် မုန့်ဖိုးစိုတာ သီးသမ့်ယံဗုံငွေအောက်ကသာ ဖြစ်နိုင်မှာမို့စ်…။
.ဟုတ်ပါတယ် ကကြောင်ရေ။ နိုင်ငံခြားမှာက အမြတ်ခွန်ကို ကျန်မနေစေရအောင်ကို စဉ်းစားပြီး အချိန်ယူပြီး အမြတ်ခွန် ဆောင်ကြသတဲ့။ အမြတ်ခွန်ပေးဖို့ ကျန်နေရင် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် စိတ်မလုံကြဘူးတဲ့။ သူတို့ ဘာအလှူ မှ မလုပ်ဖူးကြဘူးတဲ့။ ပါတီပွဲအသေးစားလေးတွေ ပေးတာလောက်ပဲ ရှိကြသတဲ့။
ချယ်ရတီ..ဂစ်ဖ်.. ပရဲဆန့်.. ဒိုနေရှင်း.. စုံပလုံနေအောင်အမည်တွေရှိပေမယ့်.. အခွန်ဆောင်ရင်တော့.. စနစ်တကျလုပ်ရတာပါပဲ..။ ရမ်းလှူလိုက်လို့မရ..။
ယူအက်စ်မှာ.. အဲလိုအလှူတွေအားလုံးဖြစ်မြောက်အောင်.. အမြတ်ခွန်ရုံးကထိမ်းကြောင်း.. တွန်းအားပေးထားတယ်ထင်မိတယ်…။
ဒါကြောင့်.. အမေရိကန်တွေက.. အလှူဆုံးတွေထဲပါတာ…
အသင်း..အဖွဲ့အစည်းထောင်ရင်.. အခွန်ရုံးကနေ.. ဘာလည်းဆိုတာသေချာစိစစ်.. နံပါတ်တခုထုတ်ပေးတယ်..။
အဲဒီနံပါတ်က.. သူ့ကိုလာလှူတဲ့သူတွေ.. အဖွဲ့အစည်းတွေကို.. အခွန်လွတ်ငြိမ်းခွင့်…ရှိ/မရှိ ဆုံးဖြတ်တာပေါ့…။
အောက်မှာ ယူအက်စ်က အခွန်ရုံးသတ်မှတ်ပေးထားတဲ့လှူပုံလှူနည်း…။
အောက်မှာက.. အခွန်ဌာနက.. လုပ်ပေးထားတဲ့.. အခွန်လွတ်အသင်းအဖွဲ့တွေစာရင်း..
တကယ်တော့.. ခရစ်ယန်တွေမှာရော..မွတ်စလင်တွေမှာရော.. ကိုယ့်ဝင်ငွေရဲ့.. ရာခိုင်နှုန်းတခုကို.. လှူကိုလှူရမယ်ဆိုတဲ့.. သတ်မှတ်ချက်ရှိထားတယ်လို့.. ထင်တာပဲ.။
ကြုံလို့ပြောရရင်.. အမေရိကားက.. အမေရိကန်တွေ.. တနှစ်ပြည့်ရင်..အမြတ်ခွန်ကျန်နေလို့ကို.. မရ..။
ယူအက်စ်အပြင်ရောက်နေလည်း.. ဧပြီ၁၅ရက်နေ့မတိုင်မှီပြန်လာ.. အခွန်ကိစ္စလုပ်ကြရသဗျ..။
မလုပ်လို့ကတော့.. တသက်စာမှတ်သွားအောင်.. အိုင်အာအက်စ်က ပုံစံပေးပါတယ်..။
အစိုးရကိုအခွန်မပေးချင်ရင်.. ကိုယ့်နာမယ်လေးလည်းကျန်အောင်.. လှူပစ်လိုက်လို့ရတာမို့.. ၀င်ငွေကောင်းသူတွေဟာ.. ချယ်ရတီတွေကို..
ပြီးခဲ့တဲ့တပါတ်ကတင်.. မြန်မာ-အမေရိကန်တယောက်များ.. တနှစ်တနှစ်.. ဒေါ်လှ၁သန်းခွဲ အတင်းကိုလှူပစ်နေရကြောင်းပြောတာ သိလိုက်ရသေး..။
သိပ်ချီးပ မနေပါနဲ့ စီအိုင်အေ ဦးမာမွတ်ရာ..။ အလှူ ခံမှတ်ပုံတင်နဲ့ လုပ်စားနေတဲ့ ကျောင်း၊ချာ့ခ်ျ၊ရိပ်သာ၊ဌာနတွေ တဘုံဂျီး။ အခွန်မှာ လှူ တယ်ပြပီး တျောက်တဝက် ခွဲယူကြတာ မသိတာမှက်လို့။ ဗြမ္မာပြည်ပေါက် အဖိုးဂျီးတျောက် အဲလိုပဲ အလှူ ခံနာမည် ခံပေး၊ တဝက်ယူလို့ ညှိတာ ဗြမ္မာဘုန်းကြီးကျောင်းက လာဘ်မခံရဲတော့ လုပ်ရဲတဲ့ လည်လည်ဝယ်ဝယ်ရှိတဲ့ ဘာသာခြားကျောင်း ရသွားဒရယ်.. ကြာတော့ ကြာပါပီ အဖျစ်က…။
အခွန်ကို လူတိုင်း၊ လုပ်ငန်းတိုင်းလိုလို လိင်တယ်။ မလိင်တဲ့ လုပ်ငန်း၊ လူဆိုဒါ လိင်ဖို့မဖြစ်နိုင်လို့ နှမလက်လျှော့နေဗေဒေါ့ လိုက်ရတာများတယ်။ အစိုးမရကလည်း လိင်မှန်းသိလျက်နဲ့ကို အတိုင်းအတာ တခုထိ လွှတ်ပေးထားတာ။ သိပ်ဆိုးဆိုးရွားရွား ဖြစ်မှ၊ ပေါ်တင်ကျလွန်းမှ၊ သောက်မြင်ကတ်မှ၊ တိုင်သူရှိမှ လုပ်တယ်။ အခွန်ဌာန လူမလောက်တာလည်း ပါတာပေါ့စ်။ တကယ် အခွန် ဖိဖိစီးစီးကောက်၊ လူမှုဖုံလုံရေး၊ ကျန်းမာရေး အင်ထု ခိုးစားနေသူတွေ ဖမ်းကြည့်ပါလား.. ယူအက်စမှာ ပြနေတဲ့ ဘတ်ဂျက်လိုငွေ ချက်ခြင်းပြည့်သွားစေရမည်။ သို့သော် မကြာဂင်မှာပဲ အဓိကရုဏ်းတွေ ဖြစ်လာမှာသိလို့.. ကိုယ့်လူစားတာပဲ စားပစေဆိုပီး လွှတ်ပေးထားတာ။ နိုင်ငံရေးလည်း ပါတယ်.. အခွန်မမြှင့်နဲ့အုံး.. တိတိကျကျ အခွန်ကောက်တဲ့ လူမှုဖူလုံရေးခံစားခွင့် တဂယ်စစ်ဆေးတဲ့ အစိုးမရ သက်တမ်းတခုထဲနဲ့ ကြွမှာပဲ၊ အစိုးမရဒင်မက ပါတီပါ မြောင်းထဲရောက်မှာ။ ဒီတော့ ရလျင် အခွံကို သူများနည်းတူလိင်.. လောဘသိပ်မကျီးနဲ့၊ ညောင်သီးလည်းစား ညောင်သံလည်း နားထောင်..။ ပိုတဲ့ငွေနဲ့ ဘိသွားဆော်.. ကြက်မဂျီးနဲ့ ညှီညွတ်အိ။
နယ်စပ်နဲ့ ပြည်တွင်းရောက် … ပြည်ပ NGO တော်တော်များများက စေတနာထက် ၊ အခွန်ရှောင်ချင်လို့ ချယ်ရတီလုပ်နေကြတာ များပါတယ် ။ တဝက်စားတဝက်လှု နယ်စပ် ဒုက္ခသည်စခန်းတွေကို ဗန်းပြပြီး ထောနေတဲ့ အဖြူတွေ မျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ ။ သူတို့ အဖွဲ့အစည်းကို လှုရင် ဘယ်လောက် အခွန်သက်သာခွင့်ရှိမယ် ၊ အကျိုးအမြတ်ကဘယ်လိုဆိုပြီး မားကတ်တင်းဆင်းတာခင်ဗျ ။ ဒါကြောင့် အဲသည့် NGO က အဖြူတွေ တိုက်အကောင်းစား ကားအကောင်းစားနဲ့ ကြော့ကြော့လေးနေနိုင်တာ ။ ပရဟိတ္တသမားမဟုတ်ဘူး ၊ ကိုယ်ကျိုးစီးပွါးရှာတဲ့ အတ္တသမားတွေ ။ ရင်နာအောင်ပြောရရင် … မျောက်ပြဆန်တောင်း အလုပ်ခံရတာ ။
ဘီလ်ဂိတ်လို သူဋ္ဌေးမျိုးကြတော့ ဖောင်ဒေးရှင်းထောင်ပြီး ရောဂါကြီး ၃-မျိုးအတွက် ဆေး ဒါရိုက်လှုတယ် ၊ အဲဒါမျိုးကွာတယ်ဗျ ။
အောင်မှာ…. မှဖက်လိုက် မှိုက်ဖက်စ်ပါ ဖောက်ပျံရေးသမားကများ…။ ဒီမှာ ဦးဖောက်စ် ခီများ ခုချိန် ငတ်နေတာ အဝှာ.. နယ်စပ်ကလူတွေက ထမင်းငတ်တာ။ လုံးဝ မီတူ။။
ကိုယ့်(သူ့)လုပ်အားနဲ့ရှာထားတဲ့.. ကိုယ့်(သူ့)ငွေကို.. အစိုးရကိုအခွန်ဆောင်ပြီးပေးချင်ပေးမယ်..
ဒီလိုလုပ်တာဟာ… ….တပါးသူတွေကိုလိမ်ညာလှည့်စားနေတာမဟုတ်..။ ကိုယ့်(သူ)့ငွေနဲ့ကိုယ်(သူ) အလှူတရားပါတယ်..။
ဒီအလှူငွေတွေကို.. NGO အဖွဲ့အစည်းတွေက.. သုံးစွဲကြတာမှာ…. NGO ၀န်ထမ်းဆိုတာ.. လခစားရပြီး.. အဲဒီလစာငွေနဲ့.. သူ့ဘ၀နဲ့သူရပ်တည်ရတဲ့ဝန်ထမ်းတွေပဲမို့.. (အလှုရှင်က.. သဘောတူသမျှ..) တရားမျှတတယ်လို့… ထင်..။
ကျ​နော်​က​တော့ ဘာသာ​ရေး အလှူနဲ့ လူမှု​ရေး (ပရဟတ ) အလှူဆိုပြီးခွဲမြင်​တယ်​ဗျ ။ တိုင်းပြည်​ဆင်းရဲ တာက ဘာသာ​ရေး အလှူ များပြီး လူမှူ​ရေး အလှူအားနည်းလို့ လို့ သုံးသပ်​ပါတယ်​ ။ ပရဟတ ဆိုတာ အရင်​က ဆိုရင်​ မိဘမဲ့​တွေ လက်​ခံ တဲ့ ဘုန်​​တော်​ကြီး​ကျောင်း​တွေပဲ ရှိတာ ။ ခု​နောက်​ပိုင်းမှ ပရဟိတ လူမှူ​ရေး အသင်း​လေး​တွေ ​ပေါ်လာတာ မကြာ​သေးပါဘူး ။ ခု ကျ​နော်​တို့နိုင်​ငံမှာက ( ကျ​နော်​အမြင်​​ပြောရရင်​ ) ဘာသာ​ရေး အလှူ နဲ့ လူမှူ​ရေး အလှူက ဟန်​ချက်​မညီဘူးဗျ ။ ဘုရားတည်​ဖို့ ငါး​ထောင်​လှူဖို့ ၀န်​မ​လေးတဲ့ သူများ​ပေမဲ့ လူမှူ​ရေး ပရဟိတ အလှူကျ​တော့ တစ်​​ထောင်​​လောက်​ထည့်​ဖို့ ၀န်​​လေး​နေတဲ့ သူ​တွေ အများကြီး​တွေ့ဖူးတယ်​ ။ လက်​​ဆောင်​ဆိုတာက​တော့ သ​ဘောမကျပါဘူး ။ ကျ​နော်​နားလည်​ထားတာက လက်​​ဆောင်​ဆိုတဲ့ အသုံးက လာဘ်​​ပေးတာကို ​ပြောတဲ့ တစ်​ခြားအသုံး ။ တစ်​​နေရာရာ​ရောက်​လို့ ကိုယ့်​ သူငယ်​ချင်းမိတ်​​ဆွေ​တွေ အတွက်​ အမှတ်​တရ ၀ယ်​လာ ယူလာ​ပေးတာကို လက်​​ဆောင်​လို့ သုံးတာ ။ ​ဆောင်​ ဆိုတဲ့ စာလုံးကိုက ယူ​ဆောင်​တယ်​ ဆိုတဲ့ အနက်​ပါတယ်​​လေ ။ ကိုယ်​က လက်​နဲ့ ယူ​ဆောင်​​ပေးတယ်​​ပေါ့ ။ ဒါက ကျ​နော်​ တစ်​ဦးထဲ အမြင်​ပါ​နော်​ ငြင်းတာမဟုတ်​ပါဘူး ။
Published: Nov 18, 2014 12:02 a.m. ET
ဒီ ကိန်းဂဏန်း တွေ အရ ဆိုရင် ဂုဏ်ယူဖို့ ကောင်းလား/မကောင်းလား စဉ်းစားဆဲ။
သူစိမ်းတွေ ကို ကူညီတတ် တဲ့ ရာနှုန်း နဲ့ ဆို တို့ မြန်မာများ အောက်ခြေမှာ။
လူချင်းတူတူ.. . အဲလိုကြီးမြင့်တယ်..မြတ်တယ်ခွဲတာကိုက.. မြန်မာတွေရဲ့.. ပြဿနာအစစ်လို့ထင်မိတယ်..။
All men are created equal – Wikipedia, the free encyclopedia
The quotation “All men are created equal” has been called an “immortal declaration”, and “perhaps [the] single phrase” of the American Revolutionary period .
.သဂျီး အဲဒါကြီး ဆွဲပြလိုက်တော့ ရှင်းသွားတာပေါ့။ ဒီလောက်လှူ ပြီး ဒီလောက်မွဲနေတာ ဘာသာရေး ပါတဲ့။
.ပရဟိတ သမားတွေလည်း မမှားပါဘူး။ အဘနီ ပြောသလိုပဲ ဘာသာရေးအလှူ အားနည်းပြီး တခြားဟာ နည်းနေလို့ ဖြစ်လိမ့်မယ်။ အလှူ ဒါန နဲ့ ပတ်သက်ရင် မျှစ်စိတ်ထဲမှာ အခံရှိတယ်။ ငယ်ကတည်းက ဖြစ်လာတာပေါ့။ အမေက အလှူ ရေစက် လက်နဲ့မကွာ ဆိုတဲ့ လူမျိုး။ တော်တော့်ကို လှူ တယ်။ ထုံးစံအတိုင်း ဘုန်းဘုန်းတို့ချည်းပဲပေါ့။ ဒီကနေ့ ဒီအသက်အရွယ်အထိ ဘုန်းကြီးကျောင်းနဲ့ သီလရှင်ကျောင်းကို တစ်လ ဆန်တစ်အိတ်ကျ လှူ နေတုန်းပါပဲ။ သူ့မြေးအရင်းအတွက် ခုချိန်ထိ နို့မှုန့်တစ်ဘူး ၀ယ်မပေးဖူးသေးဘူး။ မျှစ်တို့ ခေတ်တုန်းက အိုဗာတင်းတို့ ဟောလစ်တို့ ဆိုတာ ရှားတယ်။ မျှစ်တို့က ခလေးဆိုတော့ သိပ်သောက်ချင်တာပေါ့။ ဒါပေမယ့်လည်း အိမ်မှာ မသောက်ရဘူး။ ဘုန်းကြီးကျောင်းအတွက် လှူ တာချည်းပဲ။ ဒါကြောင့် အလှူ ဒါနဆိုရင် မျှစ်ကလည်း သောက်ညင်ကို ကပ်နေတာ။ ပရဟိတပါ ရောပါသွားလို့။
.အားမနာတမ်း ပြောရရင် သံဃာတွေဟာ သူတို့အတွက် ပြီးပြည့်စုံအောင် ခုခံကာကွယ်ထားပြီးသား အနေမျိုး ရှိတယ်။ အမွန်အမြတ် ဟူသမျှကို အလှူ ခံယူခွင့် ရှိတယ် ဆိုတာမျိုး။ တကယ်က အမွန်အမြတ်တွေ ခံယူခွင့်ရှိတယ်ဆိုတာ တွေးကြည့်ရင် အားနာစရာကြီး။ အထက်က ပြောခဲ့တဲ့ မျှစ်တုိ့ဘ၀လိုမျိုး ။
.ဥပမာ ဆိုကြပါစို့။ ဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေ ဘာရောဂါဖြစ်တယ် ညာရောဂါဖြစ်တယ် ဥပမာ မျက်လုံးခွဲရမယ် ဆိုတာမျိုး ရှိလာရင် စပွန်စာပေး ငွေကုန်ကြေးကျခံ ကုမယ့် ဒကာတွေ အများကြီး။ အဲဒီအခါ သြော် သတ္တ၀ါ တစ်ခု ၊ ကံတစ်ခုပါ၊ အနိစ္စ ဒုက္ခ အနတ္တပါ၊ အပုပ်ကောင် ရုပ်ဆောင်နေတာပါ။ ငါ့ အတ္တဘောကြီး အတွက် ဒကာ ဒကာမတို့ ဒီလောက်ငွေကုန်ကြေးကျ ခံမနေပါနဲ့တော့။ ဒီငွေတွေကို ဘယ်ကလေးတွေအတွက် ထိရောက်တာ တစ်ခုခု လုပ်ပေးလိုက်ပါလို့ မိန့်တာများ ရှိသလားလို့ပါ။ .အဟီး ပြေးပြီ။
ငွေကြေး..ပစ္စည်း..ဥစ္စာစီမံခန့်ခွဲတာ.. နားမလည်ရ.. မသိရ..မတတ်ရအောင်လို့.. ဗုဒ္ဓက.. ၀ိနည်းတွေပညတ်..
အဲဒီပညတ်ချက်.. စည်းကမ်း..ဥပဒေ.. ၀ိနည်းကိုလိုက်နာပါ့မယ်လို့.. ကတိခံဝန်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆီကို.. ငွေကြေးဥစ္စာ.. ပစ္စည်းတွေစီမံခန့်ခွဲခိုင်းဖို့.. အတင်းအပ်ကြသူတွေရဲ့.. အတွေးအခေါ်.
.. အဲလိုဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်တဲ့.. ဘာသာရေးမျက်နှာဖုံးတွေ…..
ဒီလိုခေတ်ကြီးမှာ.. ဒါမျိုးကို.. လက်ခံ.. လိုက်နာကြတာကို… က…. အံ့သြစရာ…။
သူ့အတွက် ကျောင်းဆောက်လှူချင်ပါတယ်ဆိုတာကို ကျောင်းမလို၊မင်းကွန်းရွာလေးတွက် ဆေးပေးခန်းဆောက်လှူပေးပါလို့ ပြောလို့ ဆေးပေးခန်းလေးဖြစ်ခဲ့တယ်။
-အန်တီဒုံ ပြောတဲ့ ဆရာတော်မျိုး ရှားမှရှား ဖြစ်နေပြီခည…
-သာသနာ့အလံလွှင့်ထားတဲ့ ကားတွေများ ကောင်းလိုက်တာမိုးပျံလို့..
-မနေ့က လမ်းသွားရင်း..သာအလံ ထောင်ထားတဲ့ကား..ဘေးနားက ၀ှီးခနဲဖြတ်သွားတာ..
-ကိုယ်လိုဘဲ ပလက်ဖောင်းမလောက်လို့..အောက်ဆင်းရှောက်နေတဲ့ ၂ယောက်ဆီက..အသံထွက်လာတယ်..
-မှတ်မိနေတာ နောက်တစ်ခုက..မင်ဂလာဒုံဘက်သွားတဲ့လမ်းမှာ..ဘုန်းကြီးကျောင်း -တစ်ခု..ဟီးထနေတာဘဲ…ရွှေရောင်တ၀င်းဝင်းနဲ့..ကျိရတာ မျက်စိဒေ ကျိန်းလို့
-ကိုယ်တွေ အဖွဲ့ သွားလှူနေကျ ကျောင်းလေးဒေ ခနော်နီခနော်နဲ့..နဲ့ တခြားစီ
ရွှေအိလေးရယ်၊ပြောပါပကော။လေးပုံမှာ သုံးပုံပုပ်နေတဲ့ အသီးကြီးပါဆို။ဒါပေမယ့် မပုပ်သေးတဲ့ ၁ပုံကျန်နေတာတော့ တကယ်ပါ။ အပုပ်၃ပုံကို လက်ညှိုးထိုး မကောင်းဘူးပြောတဲ့သူနဲ့ အကောင်း ၁ပုံကို လက်ညှိုးထိုး ကောင်းပါတယ်ပြောတဲ့သူ လက်ဖမိုးနဲ့ လက်ဖ၀ါးလိုပါပဲ။
ကောင်းတဲ့ အရသာကလည်း ကိုယ်တိုင်စားဖူးမှ သိတာဆိုတော့ ….
နှစ်​​ပေါင်း တစ်​​ထောင်​ ​လောက်​ အတွင်းမှာ ၇၅% ပုပ်​သွားပြီလား ကျန်​တဲ့ ၂၅% က​ကော ​နောက်​နှစ်​​ပေါင်း သုံးရာ ​လောက်​ ခံပါဦးမလား အံတီ ပဒုမ္မာ ​ရေ ……..
ဒီလောကကြီးမှာ.. ဖန်ခွက်တောင်မှရေတ၀က်ဖြည့်ထားတာကြည့်ပြီး.. အဆိုးမြင်…အကောင်:မြင်သမား..စသဖြင့်ခွဲကြရတာ…
ဖန်ခွက်ရေ ၃ပုံမှာ.. ၁ပုံဖြည့်ထားတာနဲ့တော့.. ကောင်း/ဆိုး/ဝေဖန်… အလုပ်မလုပ်စကောင်းကြ…။
လက်ဖမိုးနဲ့..လက်ဖ၀ါးက.. ဖြစ်နိုင်ချေ… ၅၀%စီလေ…။
ဆိုရှယ်လစ် က ဘယ်နား ကျန်ခဲ့တုန်း။ lol:-))))
ဆိုရှယ်လစ်က.. ကွန်မြုနစ်ရဲ့.. ညီတော်မောင်လေ…။
ဒါနဲ့ သူကြီးမင်း …
ဟိုတလော က မေးထားတဲ့ အဖြေ လေး မပေးသေးဘူးနော်။